Onkodka Ayaa Dilaya iPhone | Martech Zone
Onkod-weynaha ayaa Dilaya iPhone-ka
Khamiis, Juun 2, 2011 Talaado, September 4, 2012 Douglas Karr
Walter Piecyk, BTIG Cilmi baaris Falanqeeyaha ayaa sheeganaya in HTC Thunderbolt uu dhab ahaantii ka baxayo iPhone-ka 28% dukaamada Verizon. Waan ogahay sababta.
Bishan waxaan bilaabi doonnaa qoraalada qaar moobaylka. Fahamka tikniyoolajiyadda la qaatay ayaa muhiim u ah suuqleyda inay fahmaan. Kordhinta internetka mobilada ayaa si xawli ah ugu socda si ka dhakhso badan sidii qofkasta filayey Hal tusaale: baaritaanka Chrysler intii lagu jiray Super Bowl wuxuu kor u kacay 48 jeer mugga caadiga ah ee weydiimaha desktop, laakiin raadinta moobiilku wuxuu ahaa 102 jeer. GoDaddy wuxuu arkay 38 jeer weydiimo ka sarreeya inta caadiga ah, oo leh mobiil kor u socda 315 jeer.
Qalabka sida Verizon's HTC Thunderbolt ayaa wadada u xaaraya koritaankaan. Tani waa taleefan qurux badan oo Android ah. Ka dib markii aan tijaabiyey muddo bil ah, aad ayaan u jeclaaday iyada oo aan aaday oo aan iibsaday casriyaynta. Waxay ahayd inaan haysto. Telefoonku labaduba waa qurux… iyo HUGE. Qaar ka mid ah dadka waawayn waxay u arki karaan inay aad u weyn yihiin… suulka ayaan si dhib yar u dul mari karaa shaashadda weyn. Dhinac dhinac ah oo leh iPhone 4, iPhone-ka ayaa umuuqda mid caajis ah… agabkuna xitaa ma dareemayo wacdaro. Sida iPhone 4, Thunderbolt ayaa sidoo kale lagu rakibay kamarad labaad.
Fiiro gaar ah: Waxaan u iibsaday iphone 4 gabadheyda (maya, iyadu ma rabto Thunderbolt) marka waxaan dib ugu celin karaa Verizon. Ceymiska AT&T iyo biilasha ayaa aad uxun. Waxaan badbaadin doonaa xoogaa lacag ah, waxaan heli doonaa hal biil oo qoys ah mar labaad, waxaanan heli doonaa caymis kafiican iyadoo aan wicitaanadu hoos u dhicin.
Waxaan la shaqeynayay 'Droid Pro' sanadkii ugu dambeeyay ama sidaas oo waan jeclaa, laakiin farahayga baruurta ayaa la halgamay kumbuyuutarka. Waxaa la yaab leh, kumbuyuutarka muuqaalka ee Thunderbolt wuxuu ka weyn yahay kumbuyuutarka jirka ee 'Droid Pro'. Waan qori karaa si fudud - gaar ahaan markaan toos u rogo! Kadib markaan gadaal iyo gadaal u eegay shaashadaha bishii ugu dambeysay… Kaliya ma aanan dhigi karin Thunderbolt.
Waa kuwan Droid Pro, HTC Trophy, iyo HTC Thunderbolt oo dhinac ah:
Waxaan sidoo kale awooday inaan tijaabiyo HTC Trophy, aaladda Windows Phone 7. Ha u dhimin Windows Phone 7… istcimaalka isticmaalaha maahan mid xarrago leh, way ka sahlan tahay in la raaco marka loo eego iPhone ama Android sidaan qabo. In kasta oo wakaaladaha iyo tiknoolajiyada aniga oo kale ahi u dhaqaaqi doonin Windows Phone 7, suuqa kala iibsiga shirkaduhu waa mid aad u weyn. Waxaan tusay nin diyaarad ah oo ila socda aniga iyo Atlanta wuxuuna igu yiri ma sugi karo qoditaanka waa Blackberry mid. Waqtiga ayaa sheegi doona - laakiin waxaan si adag u maleynayaa in Microsoft ay ka baxday tartanka waqti kasta oo ugu dhaqsaha badan tan iyo markii ay iyagu leeyihiin emaylka shirkadaha.
Nasiib darrose, uma maleynayo in qalabka HTC Trophy uusan la jaan qaadi karin nidaamka qalliinka. Kaamirada si toos ah ayaa ureysa. Sawirka dhanka bidix, waxaad ku arki doontaa sawirka Thunderbolt (8 Megapixel) dhanka bidix, Trophy (5 Megapixel) dhanka midig. Fiidiyow ahaan, Thunderbolt wuxuu ku diiwaan galiyaa 720 HD… marka waxaan ugu dambeyn iska fogeyn karaa inaan ilaaliyo kamarad gacmeed ila socota meel kasta oo aan aado. Mid ka mid ah muuqaalka naqshadeynta gaarka ah waa qeybta dambe ee gadaal oo jiidaya si uu taleefanka u taagnaado… fikrad qabow! Waxay ahayd saacaddaydii habeennimo ee sariirtayda xalay.
Cabashada kaliya ee aan ka maqlay Thunderbolt waa nolosha batteriga. Runtii dan kama lihi, in kastoo. Had iyo jeer waxaan ku safraa batari USB ah iyo xeedho. Si fudud iskama joojin karo indha indheynta shaashadda. Waxaan xiiseynayaa haddii mowjaddan cusub ee kamaradaha ay tahay dhammaadka iPhone-ka. Nidaamyada Operating-ka ee Android iyo Windows Phone 7 labaduba way ka sareeyaan, qalabkan cusubna maalinba maalinta ka dambaysa way sii fiicnaanayaan.
Twerrific! Badhanka Raaca Twitter
Jun 3, 2011 saacadu markay ahayd 2:08 AM
Waxaan runtii jeclaan lahaa in Verizone uu helo mid ka mid ah telefoonada rasmiga ah ee Google Nexus. Xaqiiqdii kuma jiro shaashadda weyn laakiin waan jeclahay Android (in kasta oo qalabkeyga Droid Eris uusan waligiis kor u kicin hawsha wax ka qabashada wax kasta oo ka horreeyay sii deynta lamaanaha ugu horreeya ee Android). Taleefankayga soo socdaa sidoo kale wuxuu noqon doonaa Android, ma hubo midka weli ah.
Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay war weyn oo Google ah, laakiin waa war weyn oo loogu talagalay Warshadaha Mobilada iyo kuwa Xambaara - maalin kasta waxaan aad iyo aad ugu tiirsanahay taleefannadan. Ma lihin wali Thunderbolt-ka dalka muy (Kolombiya), laakiin waa war wanaagsan inaan helno bedel wanaagsan oo iPhone ah. Waa inaad sugtaa oo aad aragtaa waxa ku dhacaya sii deynta soo socota ee iPhone.
Kaliya waxaan helay Thunderbolt waana jeclahay! Waa taleefan qurux badan oo hareeraha ka socda, iyo iyada oo loo marayo Amazon Wireless, waxaan ku helay $ 130, taas oo ku dhow 50% keydka iibsiga Verizon Store. Waqtiga ayaa sheegi doona, laakiin daqiiqad kasta oo aan isticmaalo Thunderbolt, aad iyo aad ayaan u jeclahay.